Bridgertons - ဒုတိယရာသီအတည်ပြုခြင်း Bezzia
Bridgertons: ရာသီ ၂ ကိုယခုအတည်ပြုပြီ
Susana godoy | 27/04/2021 14:00 | လက်ဆောင်
Bridgertons သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကိုပိတ်ပစ်ရန်အတွက်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထက်ပါနှစ်၏ခရစ်စမတ်ပွဲတော်တွင်ပထမဆုံးရာသီပြသခဲ့သည်၊ လများစွာကြာပြီးနောက်လူများသည်ကြံစည်မှုနှင့်၎င်း၏အဓိကဇာတ်ကောင်များအကြောင်းပြောဆိုနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤအချိန်ကာလ၏အောင်မြင်မှုကြီးပြီးလျှင်ဒုတိယအပိုင်းကိုစောင့်ဆိုင်းရန်သာဖြစ်နိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမှတ်ချက်ပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြတာပါ၊ ဒါပေမယ့်အများစုကတော့ဒါကိုငါတို့မကြိုက်တာပဲ Duke of Hastings သည်ကြာမြင့်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ရသောဒုတိယရာသီတွင်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါကထုံးနဲ့သဲတစ်ကောင်ဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီအပိုင်းအားလုံးကစပြီးရိုက်ကူးပြီးတဲ့ဒုတိယအပိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအပေါ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မယ်ဆိုတာငါတို့မသိသေးဘူး။
1 ဘယ်လို Netflix စီးရီး၏ဒုတိယရာသီဖြစ်လိမ့်မည်
2 ဘယ်အချိန် Bridgerton ရာသီ2ထွက်လာကြလိမ့်မည်နည်း
3 အဆိုပါ Bridgerton မှာနယူးမျက်နှာများ?
4 အဆိုပါ Duke မှနှုတ်ဆက်
ဘယ်လို Netflix စီးရီး၏ဒုတိယရာသီဖြစ်လိမ့်မည်
ဖျက်လိုဖျက်ဆီးသမားများမ ၀ င်စေပဲပထမရာသီနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်စေသောအခြေခံအုတ်တုတ်များထဲမှတစ်ခုသည်အချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ Duke နှင့် Daphne တို့သည်လုံးဝချစ်ကြပြီးအတူတူနေနိုင်ရန်အတားအဆီးအချို့ကိုဖြိုဖျက်ခဲ့သည်။။ သူတို့မှာပြhavingနာအတော်များများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မမြင်သေးသောသူအပေါင်းအဘို့, အခြားဘာမှတိုးတက်သွားကြသည်မဟုတ်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ခဲ့ကြသူများသည်ဤလှပသောပုံပြင်ကိုမည်သို့ဆက်လက်တည်မြဲစေမည်ကိုသိရှိခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့ကြသော်လည်း၊ ထိုအရာနှင့်မတူနိုင်ဟုထင်ရသည်။ ရာသီသစ်သည်ပထမအကြိမ်ဆက်လက်ကစားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းယခု Bridgerton အသင်းဝင်များကိုအာရုံစိုက်ပြီးအစ်ကိုကြီးဖြစ်လိမ့်မည်။။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာစာအုပ်တွေနဲ့ဆက်စပ်နေလို့ပါ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကဘယ်လိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာမြင်ရလိမ့်မယ်။ ဒါဖန်းလူငယ်လေးကသူမအတွက် Duke ကိုညည်းတွားပြီးအပြန်အလှန်မကြည့်ဘူး။ အန်တိုနီသည်ခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္overကိုယူပြီးအသစ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ပုံပြင်အသစ်များ၊
ဘယ်အချိန် Bridgerton ရာသီ2ထွက်လာကြလိမ့်မည်နည်း
Bridgerton ရာသီ2ထွက်မယ့်အချိန်အကြောင်းပြောဆိုရန်စောလွန်းသေးသည်။ ယင်း၏ရိုက်ကူးရေးသည်ဤနွေ ဦး ရာသီကတည်းက။ ဒီ caliber ပုံပြင်ကိုရိုက်ကူးရတာဘယ်လောက်ရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ် ဒီ 2021 ၏အဆုံးသို့ဖြစ်ကောင်း 2022 ၏အစအ ဦး အထိကျနော်တို့သတင်းကောင်းရှိသည်မဟုတ်ကြလိမ့်မည်ဟုသေချာသည် ငါတို့လက်များကြားတွင်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါကိုစိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်မျှော်နေခဲ့ပေမယ့်အဓိကဇာတ်ကောင်တွေထဲကတစ်ယောက်ကဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုနဲ့နောက်ထွက်လာမယ့်အချိန်ကိုကြေငြာဖို့အချိန်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Bridgerton မှာနယူးမျက်နှာများ?
၎င်းသည်ဘဝကိုယ်နှိုက်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်၊ အချို့သည်ထွက်ခွာသွားပြီးအချို့သည်အင်အားဖြင့်ရောက်ရှိလာကြသည်။ ကောင်းပြီ၊ The Bridgertons တွင်ကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိပါ။ ပေမယ့်ကတည်းက ရှိမုန်အက်ရှလေရောက်ရှိလာတဲ့Regé Jean-Page ကတော့သရုပ်ဆောင်မထားဘူး။ ဤသည်မှာအန်တိုနီ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအသစ်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပုံပြင်ဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေ၊ အစွမ်းခွန်အားတွေပါ ၀ င်လာတဲ့ပုံပေါ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီပြဇာတ်ဟာတစ်ခါမှမကြုံဖူးသေးဘူးလို့လည်းမှန်ပါတယ်။ အနည်းငယ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပိုပြီးလိုချင်စေတဲ့ပေါက်ကွဲစေတဲ့ရောစပ်မှုတစ်ခုထက်ပိုပါတယ်။ အလွန်ချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းသောမိသားစုမှကျန်ဇာတ်ကောင်များကျမတို့နှင့်အတူနောက်ထပ်ရာသီတစ်ခုဆက်ရှိလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည် ဒါပေမယ့်သေချာတာပေါ့၊ ငါတို့ဆက်စောင့်နေရ ဦး မယ်ဆိုတာမှန်တယ်။
အဆိုပါ Duke မှနှုတ်ဆက်
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ကအပြင်းအထန်တောင်းဆိုပေမယ့်သူကအဓိကဇာတ်ကောင်ပဲ၊ အောင်မြင်မှုစီးရီးမှာဒီလိုဖြစ်လေ့မရှိဘူးဆိုတာပဲ။ လူမှုကွန်ယက်များသရုပ်ဆောင်ဖို့လှည့်ပါပြီ။ ထို့ကြောင့် Instagram တွင်ကျွန်ုပ်တို့ Duke ကိုယ်တိုင်သူ၏အောင်မြင်မှုအတွက်မည်သို့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ သူဟာတစ်ရာသီသာစာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်သူဟာဆက်လက်ပါ ၀ င်နိုင်မှာမဟုတ်ပေမယ့်အသင်းဖော်တွေနဲ့သူ့အတွက်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုပေးတဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်အတွက်အမြဲတမ်းကောင်းမွန်တဲ့စကားလုံးတွေရှိပါတယ်။ ဒုတိယရာသီမှာလိုချင်ပါသလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လက်ဆောင် » Bridgertons: ရာသီ ၂ ကိုယခုအတည်ပြုပြီ
Dumbbell Row ကိုမှန်ကန်စွာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
သင့်ရဲ့စားပွဲပေါ်မှာဖြည့်စွက်ရန်မျက်မှန်5အမျိုးအစားများ